Tag: api | Martech Zone
Jimco, Abriil 9, 2021 Jimco, Abriil 9, 2021 Douglas Karr
Macaamiil dhow oo aan la shaqeynay wuxuu lahaa qaab dhismeed adag oo isku dhejisan darsin ama wax la mid ah iyo xitaa meelo badan oo laga soo galo. Natiijadu waxay ahayd tan oo isku mid ah, arrimaha tayada xogta, iyo ku adkaanta maaraynta hirgelinta dheeraad ah. In kasta oo ay doonayeen inaan wax dheeraad ah ku darno, waxaan kula talinay inay aqoonsadaan oo ay hirgeliyaan Nidaamka Macluumaadka Macaamiisha (CDP) si ay si wanaagsan ugu maareeyaan dhammaan qodobbada gelitaanka xogta nidaamyadooda, hagaajinta saxsanaantooda xogtooda, u hoggaansamaan
Sabtida, Maarso 6, 2021 Jimce, Maarso 5, 2021 Douglas Karr
Toddobaad kasta waxaan la qaataa saaxiibkeyga wanaagsan Adam Small. Adam waa horumariye weyn… wuxuu horumariyay dhammaan suuqgeynta suuq geynta guryaha oo leh astaamo aan caadi aheyn - xitaa kaliya ku darista ikhtiyaarrada tooska ah ee boostada ee wakiiladiisa inay u diraan kaararka boostada iyagoon xitaa u baahnayn inay naqshadeeyaan! Aniga oo kale, Adam wuxuu ku horumaray dhammaan barnaamijyada luqadaha iyo barnaamijyada. Dabcan, wuxuu u sameeyaa si xirfad leh maalin walbana aniga oo ku xayiran horumarin kasta
Otomatiga Dhisida REST-kaaga API, Gudiga Maamulka, iyo Dukumiintiyada Boostada
Axad, Janaayo 31, 2021 Axad, Janaayo 31, 2021 Douglas Karr
Habka ugu weyn ee lagu cabbiro codsi kasta oo khadka tooska ah waa inaad ka soocdo adeegsadahaaga adeegsadaha lakabka xogta adoo adeegsanaya barnaamijka barnaamijka barnaamijka (API). Haddii aad ku cusub tahay horumarka, API waa fikrad fudud oo quruxsan. Sida aad u gasho oo aad u adeegsato codsi websaydh ah adoo adeegsanaya biraawsar iyo taxane ah codsiyada HTTP, dalabkaagu wuxuu samayn karaa wax la mid ah adoo adeegsanaya REST API iyo barnaamij. Maaddaama dad badani galaan barnaamijyada, iyagu
Sida Si Deg Deg Ah Loogu Bilaabo Olole Hawada Ku Saabsan Oo Aan Laheyn Xirfadaha Koodhka
Khamiis, Janaayo 21, 2021 Khamiis, Janaayo 21, 2021 Katarzyna Banasik
Ka dib iibinta Jimcaha Madow, dukaamaysiga ciida masiixiga, iyo iibinta kirismaska ​​kadib waxaan isku aragnaa xilligii iibka ee ugu caajiska badnaa sanadka hadana markale - waa qabow, cirro, roob, iyo baraf. Dadku waxay fadhiyaan guriga, halkii ay ku dhex wareegi lahaayeen meelaha laga dukaameysto. Daraasad 2010 uu sameeyay dhaqaaleyahan, Kyle B. Murray, ayaa shaaca ka qaaday in soo-gaadhista iftiinka qorraxdu ay kordhin karto isticmaalka iyo suurtagalnimada in aan kharash garaynno. Sidoo kale, markay daruurtu iyo qabow tahay, suurtogalnimadeennu inaan kharash garaynno way yaraanaysaa. Intaa waxaa dheer, gudaha